Arfiilee Barruu gara wantoota Fakkasaatti Jijjiiru
Akuuma wantoota fakkasaa gulaaluufi hamamtaa jijjjiiruu dandeessutti, arfiilee barruu gara qonyootaatti jijjiiruu dandeessa. Erga yeroo tokko barruu gara qonyootti jijjiirteen booddatti, kana booda qabiyyee barruu gulaaluu hin dandeessu.
Barruu gara wanta fakkasaatti jijjiiruuf:
Barruu jijjiiruu barbaaddu filitii, kaneen ittaanan keessaa tokko hojjadhu:
Fakkassa LibreOffice keessa, Fooyyeessi - Jijjiirii - Gara Qanyootti fili.
Impress LibreOffice keessaa, haandaara barruu wanta mirgapcuqaasi, kana booda Jijjiirii - Gara Qanyootti fili.
Yoo barruun kee arfii tokko olqabatee, barruu jijjiiramee wanta tuuta'ee ta'a. Tokkon tokkon wantoota gulaaluuf, tuutee lama-cuqaasi yemuu fixxuu, ESC dhiibi.
Amma kabala Fakkasaa irraa, sajoo Qaphxilee cuqaasi. Wanticha cuqaasi. Qabxiilee Bézier hunda arguu dandeessa. Kabala qabxiilee gulaali irraa Qabxiilee Gulaaluu saaguuf, akkasumasa haquuf sajoolee baay'ee arguu dandeessa.
Hojbocquu Faayata Barruu Saxaatoof
Title is: Arfiilee Barruu gara wantoota Fakkasaatti Jijjiiru